Lugana, Italy: Wines Waiting in the Wings | Breaking Travel News
Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » ILugana, e-Itali: Ukulinda iiwayini kwiiPhiko
ILugana, e-Itali: Ukulinda iiwayini kwiiPhiko
ILugana, emi kwingingqi ye-vinicultural esemantla ElamaTaliyane, uhleli ngasekupheleni kweLake Garda. ILugana, ethathwe kwiLatin Lacus Lucanus (ichibi lasehlathini) iyaziwa ngeewayini zayo, kwaye lo mmandla ukwabonelela ngamathuba okhenketho amangalisayo njengeempembelelo zonqulo ezivela kumaXesha Aphakathi ngakumbi kwiidolophu zaseSan Benedetto di Lugana, San Vigilie di Lugana neSan Martino di Lugana zigcinwe kakuhle kwaye ziyafikeleleka.
Uphando lubonisa ukuba imbewu yakudala yeediliya efumaneka kwiPeschiera del Garda ivela kwimidiliya ekhuliswe kule ndawo ukusukela ngeXesha leBronze (okanye ngaphambili). Iwayini emhlophe ikwabhalwe phantsi kwincwadi ka-Andrea Bacci ka-1595, De Naturali Vinorum Historia (Kwimbali yeNdalo yeWayini). Ukongeza, iLugana yayiyi-DOC yokuqala ebhaliswe eLombardy, kwaye yenye yeyokuqala e-Itali.
Okwangoku i-DOC yaseLugana ineehektare ezingama-2700 zeediliya eziphuma kwiilali zokuloba kunye needolophu ezizele iinqaba zaseDesenzano ukuya ePeschiera, kwaye zibandakanya iinxalenye zeLonato, Pozzolengo naseSimione. Into ebalulekileyo exhasa impumelelo yaseLugana yimpembelelo yayo encinci, engaqhelekanga kumantla e-Itali njengoko imozulu iphakathi kweLake kwaye ngelixa ihlobo lishushu, azitshisi kwaye ubusika abumnene. Ichibi ligcina iqabaka entwasahlobo kwaye kuhlala kukho impepho egcina izidiliya zingena umoya kwaye iidiliya zisempilweni kuyo yonke indlela ukuya esivunweni.
Inxalenye enkulu yomhlaba wommandla (malunga ne-5,436 yeehektare phantsi komdiliya) zikumathafa asezantsi kunye nomhlaba oxineneyo ogubungele ibhedi ye-moraine etyebileyo. Umhlaba ombala okhanyayo onemvelaphi ye-glacial oboshwe ekudalweni kweLake Garda unika ubuncinci kwiwayini, kunye neenowuthi ezinencasa, ubomi obude kunye nolwakhiwo.
I-Lugana Denominazione di Origine Controllata (DOC) i-akhawunti ye-90 yepesenti yemveliso iyonke, kwaye iindawo ezishiyekileyo zichongwe njengeSuperiore okanye iRiserva, okanye iveliswa njengokhetho oluqaqambileyo okanye lokuvuna kade. Ngaphezulu kwezigidi ezili-17.5 zeebhotile zaveliswa ngo-2018 ngeepesenti ezingama-70 ezithunyelwa ngaphandle e-US-yeemarike ezinkulu zeli. FUNDA INQAKU ELIPHELELEYO WINES.TRAVEL